Rindrambaiko Lahatsoratra Atao Feo Mampianatra Ny Fomba Fanononana Ny Teny Quechua Ao Amin’ny Media Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2015 9:35 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, English, македонски, Français, Shqip, polski, Ελληνικά, عربي, Español
Fangon'ny Hinantin, tetikasa fampandrosoana ny rindrambaiko izay mandrisika ny fampiasana ny teny Quechua, teny indizeny tsy dia miasa firy intsony. Nahazoan-dalana.
Namorona fampiharana rindrambaiko lahatsoratra atao feo ny vondrom-pikarohana Peroviana izay afaka manova fehezanteny Quechua ho lahateny, ary alefan'izy ireo manerana ny tambajotra sosialy toy ny YouTube, Twitter, sy ny Facebook avy eo.
Manam-pahaizana amin'ny fikarohana sy fampandrosoana ny rindrambaiko amin'ny teny informatika ny Hinantin ao Cusco, ao Però, ary miasa mampiroborobo ny fampiasana ny fiteny teratany Peroviana satria mihena ny isan'ny olona mavitrika miteny azy ireo.
Niresaka tamin'i Richard Castro, iray amin'ireo mpikambana mpamorona ny Hinantin ny Global Voices, nanazava izy fa voalohany amin'ireo tetikasa rindrambaiko maromaro mikasika ny teny Quechua izy ity, tahaka ny mpanova lahatsoratra ho feo izay afaka manova lahatsoratra ho kabary ho azy, eo koa ny mpanamarina tsipelina antserasera, ary ny plug-in fanitsian-dahatsoratra LibreOffice.
Ny tena ataon'ny mpanova lahatsoratra ho kabary am-peo indrindra dia maka fehezanteny iray na teny iray androany (ao anatin'ny andro), ary mampiasa famakiana feo, manova lahatsoratra ho feo ary mandefa ny feo ao amin'ny tambajotra sosialy. Mandefa sary miaraka amin'ny teny androany sy ny dikany amin'ny fiteny samihafa ny kaonty Instagram-ny tetikasa. Tehirizina ao amin'ny SoundCloud ihany koa ny raki-peo, araka ny hita eto miaraka amin'ny dikam-peon'ny teny wayra, teny Quechua hoe “rivotra”:
Ao anatin'ity lahatsary ao amin'ny YouTube ity, mampianatra ny mpijery mikasika ny fomba fanononana ny teny maywa, teny Quechua midika hoe “volomparasy” ny Hinantin :
Namboarina tamin'ny santionana (angona) antontan-dahatsoratra sy raki-peo ho an'ny teny Quechua ny rindrambaiko. Mifantoka amin'ny Cusco, Puno, ary Lima Quechua ny tetikasa, ho mpandika teny misahana ny fizotran'ity dingana ity avy amin'ireo faritra ireo. Samy mampiasa ny fomba fiteniny ireo olona manome ny feony ao amin'ny raki-peo, na dia Quechua Tatsimo aza ny rafi-tsoratra ampiasaina hanehoana ny feo ao amin'ny lahatsary sy ny fandraisam-peo.
Afaka mampiasa rafi-tsoratra izay tiany ny mpandika teny tsirairay, satria ny lahatsoratra nampidirina tao amin'ny rafitra dia mifanaraka ho azy amin'ny teny Quechua tatsimo. Mampitaha ny fandikan-teny amin'ireo mpandika teny mandeha ho azy amin'ny teny Quechua ireo mpikambana ao amin'ny tetikasa mba hanamarina izay lesoka sy tombontsoany.
Iray amin'ireo tanjon'ny santionana antontan-dahatsoratra sy ny raki-peo ny fampiasana izany amin'ny fampianarana ny teny Quechua amin'ny alalan'ny sehatra elektronika antsoina hoe RunaSimi. Noho izany antony izany, namorona vondrona madinika manokana misahana ny antontan-dahatsoratra sy ny raki-peo ireo mpandray anjara amin'ny tetikasa.
Manampy amin'ny fampandrosoana ireo tetikasa fanohanana ny teny teratany hafa mifandray amin'ny teny Quechua, Asháninka ary ny Aymara ihany koa ny vondrona ambadiky ny fikirakirana ny Hinantin
Hatramin'ny teny indizeny ho anisan'ny vakoka ara-kolontsaina Peroviana, mifandray amin'ny politika fampiroboroboana ny fahasamihafana sy ny fifanakalozana kolontsaina iarahana ny fandinihana sy ny fampiasana azy ireo. Araka ny vinavina amin'izao fotoana izao, manana tenin-drazana maherin'ny 50 ny firenena, ary koa tenin-drazana maro hafa izay heverina fa efa tsy ampiasaina intsony. Nanangona Tahirin-kevitra Nasionaly momba ny Teny Indizeny, miaraka amin'ireo tarehimarika ofisialy momba ny fiteny tsirairay sy ny mpampiasa azy ny Minisitry ny Kolontsaina Peroviana. Ahitana vaovao momba ny toerana ianarana ireo fiteny ireo sy ny sarintanin'ny antontanisa mampiseho ny raki-peon'ny teny indizeny sy ny tenin-drazana ny tahirin-kevitra.